एएफसी यू–२३ एसियन कप : नेपालले कुन-कुन देशसँग खेल्दैछ ? | Nepalkakura
Home गृहपृष्ठ खेलकुद एएफसी यू–२३ एसियन कप : नेपालले कुन-कुन देशसँग खेल्दैछ ?
काठमाडौं ः एएफसी यू–२३ एसियन कप छनोटका लागि नेपाली यू–२३ टोली मंगलबार बिहान ताजकिस्तान प्रस्थान गरेको छ। एएफसी यू–२३ एसियन कप छनोटका लागि मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले आइतबार २३ सदस्सीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेका थिए।
एएफसी यू–२३ एसियन कप छनोटमा नेपाल समूह ‘बी’मा छ। नेपालको समूहमा ताजकिस्तान, लेबनान र इरान छन्।
नेपालले समूह चरणको पहिलो खेलमा इरानसँग अक्टोबर २५ मा खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो खेलमा ताजकिस्तानसँग अक्टोबर २८ र अन्तिम खेल लेबनानसँग अक्टोबर ३१ मा खेल्नेछ। एएफसी यू–२३ एसियन कप छनोट अघि नेपालले अक्टोबर २२ मा इन्डोनेसियाको यू–२३ टोलीसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ।
यसैगरी मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन, प्रशिक्षक रोजित केसी, टिम म्यानेजरमा उत्तम भण्डारी, फिजियो राजु ढकाल, गोलरक्षक प्रशिक्षक ललित चन्द, किट म्यानेजर ज्ञानबहादुर राई, अफिसियलमा प्रवीण यादव, राजेश मानन्धर, टीकाराम लामा र सुवर्ण श्रेष्ठ छन्। यस्तै अखिल नेपाल फुटबल संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंह र एन्फा कर्मचारी युजल श्रेष्ठ पनि टोलीसँगै ताजकिस्तान प्रस्थान गरेका छन्।
Previous articleमहाकाली नदीको पुल जोडने पहुँच मार्ग बाढीले भत्कायो
Next articleसाम्राज्ञीको विवेक खड्कासँग रोमान्स